Tungsten culus Alloys - Luoyang abuurtay Tungsten-Molybdenum Waxyaabaha Co., Ltd.
cufnaanta sare, formability fiican iyo machinability, iska caabin ah daxalka u fiican, modulus sare oo barti, conductivity kaamerada cajiib ah iyo ballaarinta kaamerada hooseeyo. Waxaana u bandhigaynaa: Alloys tungsten biraha culus our.
Our "xulalka" waxaa loo isticmaalaa, tusaale ahaan, in warshadaha duulista iyo aerospace, technology caafimaad, warshadaha baabuurta iyo macdantu ama qodista shidaalka iyo gaaska. Waxaan si kooban u joogo saddex ka mid ah kuwan hoos ku qoran:
Alloys Our biraha culus tungsten W-Ni-Fe iyo W-Ni-CU leeyihiin cufnaanta gaar sare (17.0 in 18.8 g / cm3) iyo in la siiyo ama gaashaan lagu kalsoonaan karo ka dhan ah X-ray iyo shucaaca gamma. Labada W-Ni-Fe iyo wax aan magnetic W-Ni-CU waxaa loo isticmaalaa gaashaamashada tusaale ahaan in codsiga caafimaad, laakiin sidoo kale in industry saliidda iyo gaaska. Sida collimators ee qalabka daaweynta shucaaca waxay hubiyo gaadhista sax ah. In miisaanka lagu miisaamo waxaan ka dhigi isticmaalka cufnaanta gaar sare ee tungsten daawaha biraha culus our. W-Ni-Fe iyo W-Ni-CU ballaariyo oo kaliya aad u yar marka heerkulku sare oo gaar ahaan si fiican dhereggu kulaylka. Sida qobays caaryada, shuqulka macdantu aluminium, waxay la si joogta ah kululayn karaa oo la qaboojiyey oo aan debcaan.
In geeddi-socodka Machining saaridda korontada (EDM), biraha waxaa machined heer xad dhaaf ah sax oo macneheedu yahay siideeyn korontada dhexeeya workpiece iyo koronto. Marka copper iyo graphite electrodes ma yihiin ilaa shaqada, xirtaan u adkaysta electrodes tungsten-copper- ay awoodaan in ay mashiinka xataa birta adag si dhib la'aan. In nozzles buufiyo plasma for warshadaha daahan ah, guryaha wax of tungsten iyo copper mar kale la dhamaystiro mid kale oo si fiican.
Tageerayaasha tungsten macdan ah macdanaha culus ka kooban yahay laba qaybood oo qalab. Inta lagu guda jiro habka wax soo saarka labada heer ah, saldhig sintered furan waxaa marka hore soo saaray ka soo qayb la barta barafku ka sareeya, tusaale ahaan bir ah madax adkaadeen, ka hor daloolada furan yihiin ka dibna dhex leh qayb ka liquified la barta barafku hoose. The guryaha oo ka mid ah qaybaha shaqsi bedelin. Marka kormeero oo shaashadaha ka under, sifooyinka kasta oo ka mid ah qaybaha ay sii wadi in ay cad. At heerka sheybaarada waaweyn, si kastaba ha ahaatee, guryaha oo ka mid ah qaybaha shaqsi lagu daro. Sida wax macdan ah hybrid, wax ku cusub waxaa laga yaabaa, tusaale ahaan, hantiyi conductivity kaamerada cusub iyo qiimaha ballaarinta kaamerada.
Biraha tungsten-culus wajiga sintered Liquid waxaa la soo saaray ka soo dar ah ee budo biraha in habka wax soo saarka hal marxalad lagu guda jiro taas oo ka kooban la dhibcood barafku hoose waxaa ku dhalaashay gal kuwa dhibcood barafku sare. Inta lagu guda jiro wajiga gal, qaybaha kuwaas sameeyaan Alloys leh kuwa in ay leeyihiin hal dhibic barafku sare. Xitaa xaddi weyn oo tungsten ah, taas oo uu leeyahay dhibic barafku sare, waxaa loo kala diri inta lagu guda jiro wajiga gal. wajiga dareere qalabka farcan sintered Plansee ee ka faa'iidaysan cufnaanta qayb tungsten ee, modulus of barti iyo kartida si uu u nuugo X-ray iyo shucaaca gamma aan ka cabanaya wax ka mid ah cillado la xiriira howsha tungsten saafi ah ka duwan, Wehliyaha ee ballaarinta kaamerada iyo conductivity kaamerada iyo korontada oo ka mid ah qaybaha wajiga sintered dareere ku xiran tahay ilaa xad aad u weyn ka kooban tahay ku lug wajiga gal.
Back-kabka qalabka mar isu geeyo guryaha wax ka mid ah laba qaybood oo qalab kala duwan. Inta lagu jiro habkan, qalabka is-ceshan yihiin in ay gobolka asalka ah oo loo xidho oo kaliya isgooyska khafiif ah. Biraha ayaa waxaa u dhisnayd in caaryada ah si ay u sameeyaan bond ah micrometers wax yar uun in size. Si ka duwan farsamooyinka alxanka iyo kabida, habkan si gaar ah deggan waxaana ay hubisaa in tabinta kaamerada si mug leh.
Molybdenum Rod, Tzm Sheet, Molybdenum Plate, Tzm Plate, Sheet Molybdenum, Molybdenum,